इच्छावृत्ति: हिप्-पप्-हरू - 1
जमानालाई आफूपछि छाड्ने, आमा बाबुलाई उनीहरूको समयावस्थाको व्यङ्गवाणले लुत्थुक्रै भिजाउँदै, एड्भान्सको प्रतिक मानेर असभ्यताको घुम्टो ओढेर दुनियाँलाई चकित पार्न तम्सिएका छन् हिप् पप्-हरू आफ्नै न्यू स्टाइलको उल्टो परिभाषिकरणमा।
सपिङ्ग कम्प्लेक्स् जसको कालो ऐनाले बारेको बारमा आफ्नो प्रतिबिम्बलाई हेर्ने प्रयत्न गर्दै अघि-अघि जुत्तालाई भित्र्याएर शरिरलाई पछि-पछि तान्दै भित्र पस्यो एक अर्ध युवक।
मनमा जुत्ताले घ्वाँच्च घोँचेपछि, आँखामा रूपियाँ आउँदै गरेको दृश्यले दोकानदारले युवकको शिर पुच्छर तातम्य हेरिरहेका थिए। र भने- हेरन भाई दार्जिलिङको राजनीतिले, बन्दले हाम्रो किनबेजमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नि।
हुनसक्छ युवकको दिमागमा राजनीतिको कुरा पसेनन् कि ! तब त लेटेस्ट् लेडिस् लुगा देखाउनु होस् न भन्दै थियो।
अघिको कालो ऐनालाई ढकेल्दै नागा पातमा एक त्यस्तै युवती आई।
नागा पातका वरीपरी दृष्टिगोचर गर्दै त्यसको प्रतिछापलाई खोज्ने प्रयास गर्दै थियो दोकाने ।
आई पुग्यौ ? युवकले युवतितिर हेरेर नहिच्किचाई सोध्यो।
अलिकति अल्मिलिएकी जस्तै गरी र प्रश्न गरि हालिन्- के किन्नु ?
यो मन परयो ? ...दुईटा हातले माथि उचालेर तुर्लुङ्ग झुण्डाएको जामा कि स्कट-मा तान्द्राङ्ग तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएका लहराहरूलाई हेर्दै, च्याटिङ गर्लफ्रेण्डको नितम्बमा टसाउनुलाई आत्तिरहेको थियो युवक।
निर्लज अझै बनेर युवताको नितमबलाई हेर्दै लहराभित्रको पात खोज्नुमा अडिक रहिरहेको थियो दोकाने।
यसको दाम कति ? –मा झस्किँदै दोकानेले तिमीलाई नौ सय भने।
जिन्स् प्यान्टको अघिल्लो खल्तीमा के थियो कुन्नि ! – बाट साङली बाँधेर पछाडि पट्टिको दाहिने खल्तीमा बुट्टादार, टलक्क टल्किने, स्टीलले चारकुना मारेको मनी ब्यागलाई सँगसँगै नछुट्ने गरी अल्झाएका थिए। त्यसबाट कुनै आपत्ति नजनाई युवकले फुत्त सयका नौ वटा नोट ख्यास् ख्यास् गरी दोकानेको हातमा दिई हाल्यो।
बजियाको आँट त भाको हो। लगाएर भोलि अर्को च्याटिङ बोइ फ्रेण्डलाई भेट्न माल रोडमा जान ठिक्क भयो।
भोलिको सपनाले ब्यूँझन्दा च्याटिङ टाइम हातमा बाँधेको चारकुने, ठूलो फिता भएको एन्जिलिनाको जस्तै घडी हेर्दै थी।
प्याकिङ सिद्धिएर युवतीले , मायालुको ? मायाको चिन्ह हातमा हल्लाउँदै कालो ऐनाबाहिर निस्कि र अब कता जाने ? - प्रश्न गरिन्।
बिनाउत्तर एकादृष्टि लाएर युवकले उल्टो प्रश्न गरयो- तिमी कता जान्छौ ?
उत्तरमा युवतीले म एकक्षिण् साथी भेट्न जान्छु। जान्छु है...पछि भेटौँला नि ...फोन गर ल- एकै सासमा बोलेर दोकान भएदेखि उकालोतिर लागिन्।
वाऊ ! नौ सयको लुगा। उसको साथीको भन्दा अझ राम्रो। तर जुत्ता किन्न बाँकी छ। खोरबाट पाठालाई छोडिदिँदा खुशीले बुत्त्रुक बत्त्रुक उफ्रेको जस्तै मन मनमा उफ्रिँदै युवती चौरास्तातिर लागिन्।
वाक्क लाग्दो मान्छेको भिड, उँधो हेरे तुँवालोले भरिएको चियाबगान, बस्ती, आँगनमा हेरे जनसभामा ओर्लिएका मान्छेलाई ट्वालट्वालती हेर्दै आफ्नै संसार व्यस्तताभित्र हराउँदै थियो राजेस।
देखेर उसलाई- अघि आएको ? प्रश्न युवतीको।
झस्किएर राजेस- हैन...भर्खरै आएको- जवाब दिन्छ र भन्छ व्यूटी देखिन्दै छ त आज।
किन ? – राजेस
अहिले भन्दिन- युवती
घुम्न जाने कतै ? – राजेस
हेरन सपिङ् सकिएको छैन....किन्नु बाँकी छ- युवती
कफी पिउने ? राजेस
डायरी मिल्क- राजेस
नो नो – युवती
म पनि जान्छु नि त तिमीसँग सपिङ्गमा हुन्छ ?- राजेस
ल त जुङ् छिट्टो , ढिलो हुन्छ नि फेरि- युवती
कुइनाको चेपबाट युवतीले आफ्ना हात घुसाएर भोलिको सपना ( जुत्ता-स्कटमा डेटिङ गएकी) देख्दै थी। उता राजेस चालिस ब्यालिस् इञ्चको जिन्स् पाइजामाभित्र युवतीलाई लुकाई राख्ने विचारमा। तर...........।
जुत्ता दोकानभित्र- कालो बुट् जसलाई लाउँदा घुँडाको छेउछाउसम्म पुगिन्थ्यो। सेतो पासुलामा कालो बुट् वाह ! कति सुहाउँदिलो। माथिबाट लहरै-लहरा।
जुत्ता दोकानबाट बाटोतिर निस्किँदै थिए ती दुई। राजेसले थाहा नपाई युवतीले चार दिशा एकफन्को मारिन्। निकै तल आइपुग्दा ओर्लिँदा ओरेन्ट रेस्टुँरा भेटिन्थ्यो। केही खुवाउने आग्रह गर्दै थिए राजेस। होइन ढिलो भो , जान्छु भन्ने बित्तिकै रिङ् सिनेमा हलपट्टि लागिन् युवती। जिल्ल परेको राजेस गएकी युवतीलाई एकाग्र हेरि बसे।
गोजीमा तीस रूपिया। मनमा कुरा साट्ठी। गुटुमुटु पारेर हस्याङपस्याङ् गर्दै रिङ् हलको उक्कालो सिँढीमा उक्लिन्। मूल सडक पुगीन्। दुवै दिशा मुन्टो फर्काइन्। फेरि सिधा राखेर स्वात्तै अघिपट्टिको साइबर क्याफेको ढोकाभित्र पसिन्। थचक्क बसिन् कम्प्युटरको सामु। देब्रे हातका औँला किबोर्डमा, दाहिने हात माऊस् अनि दुई तिखा आँखा स्क्रीनमा टाँसेर च्याट् गर्नमा व्यस्त भइन्। स्क्रीनको एक कुनामा आफ्नै मिचिक्क मस्किँदै गरेको प्रतिबिम्ब देखेर गजक्क थिइन्। कानमा ढयाप्प हेडफोन लाएर हिप्-पप् गीत- हे सेक्सी लेडी-मा एक खुट्टाले चिन्ता बस्दै थिइन् अनि लेख्न थालिन्- भोलि कहिले हुने ? तिमी कति बेला आउने ?